Sarkaal horay uga tirsanaa KRA oo dowladda ku wareejinaya hanti dhan 278 milyan | Star FM
Home Wararka Kenya Sarkaal horay uga tirsanaa KRA oo dowladda ku wareejinaya hanti dhan 278...
Sarkaal horay uga tirsanaa KRA oo dowladda ku wareejinaya hanti dhan 278 milyan
Maxkamadda sare ee dalka ayaa guddiga anshaxa iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ee EACC u oggolaatay inuu Jeremiah Kamau Kinyua oo horay uga mid ahaa shaqaalaha maamulka canshuuraha ee KRA ugala wareego hanti qiimaheedu yahay 278 milyan oo shilin.
Hantidan oo uunan Kamau ku guulaysan inuu caddeeyo sida uu ku helay ayaa lagu wareejinaya dowladda.
Guddiga EACC ayaa laga soo xigtay in Jeremiah Kamau Kinyua oo iska casilay shaqada KRA bishii Saddexaad ee sanadkii hore uu qaab sharci darro ah ku helay lacagtan maadaama ayna isku dhigmin hantidiisa iyo dakhliga soo galayay.
Hantida ayaa waxaa qayb ka ah 18 dhulal oo ku kala yaalla Nairobi, Ruiru oo ka tirsan Kiambu, Laikipia , degmada Kitegela ee Kajiado iyo labo baabuur oo uu qiimahoodu yahay 181 milyan sidoo kale lacago ugu keydsan akoonno bangiyeed iyo Mpesa oo dhan 91.6 milyan oo shilin.
Baaritaannada ayaa muujinaya in sarkaalkan uu hantidan yeeshay muddo toddobo sano ah in kastoo mushaarkiisa billaha uu ahaa 120,000 oo shilin.
Previous articleDagaalka Dhuusamareeb ee u dhexeya ciidanka Galmudug iyo Ahlu-Sunna oo xoogeystay & ciidamo horleh oo ku biiray
Next article30,000 oo sanadkan ka qayb galaya xuska maalinta Madaraka Day